यस्ता छन् भारतमा ३ लाखमै पाइने कार – Clickmandu
यस्ता छन् भारतमा ३ लाखमै पाइने कार
क्लिकमान्डु २०७६ असोज २२ गते ९:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कार मानिसको जीवनका आवश्यकता वा सोखका विषय हुन् । कतिपयले कार आवश्यक परेर किन्छन् त कतिपयको यो सोखको विषय रहन्छ ।
सोखका लागि गाडी किन्नेहरुका लागि महङगा गाडीहरु प्रशस्त बजारमा पाइन्छन् । तर कतिपय अवस्थामा मानिसले रहर पुरा गर्न वा आवश्यकता परेर कार किन्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि थोरै बजेटमा पाइने कार आवश्यक हुन्छ ।
भारतीय बजारमा एकदमै महंगादेखि सस्ता कारहरु उपलब्ध छन् । भारतमा पाइने गाडीहरुमध्ये ३ लाख भारतीय रुपैंयाभित्रमा पाइने कार कुन-कुन छन् त ?
१. बजाजको क्युट
भारतमा ३ लाख भारु भित्रमा पाइने कारहरुमध्येको एक हो बजाज कम्पनीको क्युट कार । पेट्रोल भेरियन्टमा उपलब्ध यो गाडी ४ सिट क्षमताको रहेको छ । २१७ सिसि डिस्प्लेस्मेन्ट रहेको यो कारमा ५ वटा गियर रहेका छन् । ३५ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने यो कारमा एउटा सिलिण्डर रहेको छ भने अधिकतम गति ७० रहने कम्पनीको दाबी छ । यसको न्यूनतम मूल्य भारतमा २ लाख ७७ पर्दछ ।
२. टाटा नानो
त्यसैगरी भारतमा ३ लाख भारु भित्रमा पाइने अर्को कार हो टाटाको नानो कार । ६२४ सीसी क्षमता रहेको यो कारमा दुईवटा सिलिण्डर रहेका छन् अधिकतम गति १०५ रहेको छ । ४ वटा गियर सिस्टम रहेको यो कारमा १५ लिटर तेल क्षमता रहेको छ । भारतमा यसको न्यूनतम मूल्य २ लाख ४७ हजार रहेको छ ।
३. ड्याटसन रेडी गो
भारतमा ३ लाख भारु भित्रमा पाइने कारके सूचीमा पर्ने अर्को गाडी हो ड्याटसनको रेडि गो । ७९९ सीसी क्षमताको यो गाडी ३ वटा सिलिण्डर र ५ वटा गियर सिस्टम रहेको छ । २८ लिटर तेल क्षमता रहेको यो कारले प्रतिलिटर २२.७ किलोमिटर माइलेज दिने कम्पनीको दाबी रहेको छ । भारतमा यसको न्यूनतम मूल्य २ लाख ९८ हजार रहेको छ ।
यी माथि उल्लेखित कारहरुमा केही अन्य विशेषताहरु थप गरेमा मूल्य भने केही फरक पर्नसक्छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको पत्रः जेठ २५ मा कर तिर्न सकिँदैन, असारसम्म पुर्याउनू
मलाई अहिलेपनि सांसदहरुले कृषि, वन, स्वास्थ्यको बजेट खोइ भनेर प्रश्न गर्छनः मन्त्री खतिवडा
कर बुझाउने समय नथपिनेः जेठ २५ सम्म सबै बक्यौता कर बुझाउनुपर्ने
२०% नाफा गर्ने उद्योग पुनरकर्जाको लागि अयोग्य, बैंकका शाखालाई ५ वटा पुनरकर्जा अनिवार्य